warkii.com » Da’yarka La Qaban La’ Yahay Ee Bukayo Saka Oo Ka Hadlay Lambar Caan Ka Ah Arsenal Oo Loo Diyaariyey
Da’yarka La Qaban La’ Yahay Ee Bukayo Saka Oo Ka Hadlay Lambar Caan Ka Ah Arsenal Oo Loo Diyaariyey
Da’yarka Arsenal ee Bukayo Saka ayaa diyaar u ah inuu qaado culayska lambarka uu tababare Mikel Arteta u diyaariyey inuu xidho xili ciyaareedka dambe, kaas oo ay hore usoo xidheen halyeeyo waaweyn ee Gunners guulo ku hoggaamiyey.
Saka ayaa kulankiisii ugu horreeyey u saftay Arsenal xili ciyaareedkii hore, waxaana fursadda siiyey Unai Emery, laakiin wuxuu ugu dambayn kooxda koowaad si buuxda uga mid noqday, fursadihiisana u helay bishii December.
Arsenal ayaa muujisay kalsoonida ay ku qabto laacibkan, waxaanay bishii hore ka saxeexday heshiis cusub oo waqti dheer uu ku joogayo Emirates Stadium, taas oo soo afjartay hadal hayn suuqa ku jirtay oo la xidhiidhay mustaqbalkiisa.
Da’yarkan oo kasoo baxay kulliyadda Arsenal ayaa isku diyaarinaya inuu xili ciyaareedka dambe rigli noqdo oo uu hoggaamiyeyaasha naadiga ku biiro, inkasta oo uu xili ciyaareedkanba qayb muhiim ah kasoo ciyaaray kulamadii kooxda.
Mikel Arteta ayaa kalsooni badan ku qaba da’yarkan, waxaanu doonayaa inuu mudnaanta siiyo isaga oo booska uga saaraya ciyaartooyo waaweyn oo lacag badan mushahar ahaan uga qaata kooxda,.
Laakiin waxa usii dheer in jamaahiirtu ay xili ciyaareedka dambe arki doonaan laacibkan oo dhabarka ku sita lambarka caanka ah ee No.7 oo ay ciyaartooyo waaweyn hore ugu soo xidheen Arsenal.
Lambarkii uu hore u xidhan jiray ee No.77 ayaa laga reebay mid ka mid ah labada 7, waxaana usoo hadhay No.7 oo loo go’aamiyey inuu xidho.
Arsenal ayay hore ugu soo xidheen lambarkan ciyaartoyda ay ka mid yihiin Tomas Rosicky, Robert Pires iyo Alexis Sanchez.
Bukayo Saka ayaa ka hadlay lambarka cusub ee caanka ay ku ahaayeen xiddiguhu ee uu dhabarka ku qaadayo, waxaanu yidhi: “Aad ayaan u xiisayn jiray inaan helo. Waa wax ay tahay inaad ku riyooto, kuna fikirto sida ay sharaf u tahay inaad xidhato lambarkii halyeeyada.”
18 jirkan oo mustaqbalka kooxdiisa la xalliyey, waxa uu hadal ka joogaa midka uu u ciyaari doono xulka qaranka England ee uu hore da’yartooda ugu soo dheelay iyo xulka qaranka Nigeria ee uu asal ahaanta kasoo jeedo, sharciguna u ogol yahay.